MW Somaliland oo soo bandhigay fursadaha maalgashi ee jira – Bandhiga
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay seddex qoddob oo gobolka ku gaari karo Hodantinimo dhaqaale.
Sidaasna waxa lagu sheegay warbixin ay maanta soo xigatay Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA, oo uu daabacay maanta Warsidaha East African Business Week, oo ka soo baxa dalka Uganda, oo ku saabsaneyd shirkii maalgasjhiga kaabeyaasha dhaqaalaha iyo tamarta ee Somaliland ay khamiistii shalay ku qabatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Warsiduhu wuxuu soo xigtay war-murtiyeed uu soo saaray madaxweynaha dowladda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku caddeeyey in kaabeyaasha dhaqaalaha, Tamarta iyo soo saarista khayraadka dalku ay fure u noqon karaan horumar dhaqaale oo ay gaaro Somaliland.
Madaxweyne Muuse Biixi wuxuu iftiimiyey inuu ku rajo weyn yahay in soo saarista khayraadka dabiiciga ah ee JSL ay yareyn karto saboolnimada isla markaana u horseedi karaan shacabka Somaliland inay gaadhaan barwaaqo dhinaca dhaqaalaha ah. Md. Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha Somaliland, wuxuu war-murtiyeedkaas ku xaqiijiyey in madasha maalgashigu ay qayb ka tahay dedaalka ay Somaliland ugu jirto inay u hesho taageero dibadeed soo saarista khayraadka dalka.